I-Stylish, i-classy flat - enhle kakhulu, indawo emaphakathi
Trondheim, Trøndelag, i-Norway
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Vinko
Unayo yonke indlu engu-49sqm kuwe! Igcinwe isezingeni eliphezulu, inekamelo lokulala, igumbi lokugezela elineshawa, umshini wokuwasha nokomisa, kanye nekhishi elihlangene nendawo yokuphumula. Leli fulethi liyindawo ekahle yokuhlola iTrondheim kanye nokuhamba imizuzu emi-5 nje ukuya ezitolo, kumabha kanye nezindawo zokudlela zaseSolsiden. Isitolo segrosa esiseduzane singaphesheya komgwaqo! Ilungele ihhovisi lasekhaya, umsebenzi, noma ukuvakasha kweholide eTrondheim. I-Scandinavia yesimanje ngesitayela ... ithokomele kakhulu futhi iphumule.
Indlu ine-wifi, i-smart TV enkulu ekwazi ukufinyelela i-Netflix ne-Amazon Prime, ikhishi lesimanje elinakho konke okudingayo ukuze upheke ukudla, umshini we-Nespresso, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha nokomisa. Ekamelweni lokuphumula uzothola isitofu esibaswe ngezinkuni, indawo kasofa wokuzipholela kanye netafula lokudlela.
Igumbi lokulala linombhede ophindwe kabili ongu-160x200cm. Uma kunabantu abathathu/abane abahleli, kukhona nombhede ogoqwayo okhona kanye nosofa osendlini yokuphumula ongasetshenziswa nokulala kuwo, nokho akuwona umbhede osofa. Kukhona amashidi engeziwe, imicamelo, namathawula atholakalayo.
I-HDTV engu-70" ene- I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Amazon Prime Video
4.96(71 okushiwo abanye)
Ifulethi lisendaweni ephilayo futhi eyenzekayo yedolobha. I-Møllenberg iyindawo yomlando egcwele izakhiwo zamapulangwe ezindala kanye nohambo olufushane ukuya edolobheni (imizuzu engu-15) futhi iseduze nokuthenga nokuphila kwasebusuku kwase-Solsiden (5 imiz). Awudingi ngempela imoto ukuze uhlole i-Trondheim kusukela lapha.
Cishe uhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya e-Bakklandet futhi ungamakhefi, amabha kanye nezindawo zokudlela.
Uma uhlala endaweni yami useduze nayo yonke into.
Ukuthutha nakho kulula. Uhambo lwemizuzu eyi-15 ukuya esiteshini sesitimela futhi amabhasi aya esikhumulweni sezindiza atholakala ezansi negquma eduze kwaseSolsiden.
Ukuthenga kutholakala kalula endaweni. Isitolo segrosa esiseduzane, i-Bunnpris, singaphesheya komgwaqo futhi kunezitolo ezimbili ze-Rema 1000 zombili phakathi kohambo lwamaminithi angu-5.
Futhi useduze ne-Kristiansten Fortress. Izungezwe indawo yepaki yindawo enhle yokuhlola futhi uthola umbono omuhle wedolobha.
I-Møllenberg yindawo okufanele ube kuyo.
Ngimise ifulethi ukuthi kube indawo elula kakhulu yokuzihlola futhi ngihlole, kodwa ngiyatholakala uma unemibuzo noma izidingo ezikhethekile. Ngiyayithanda i-Trondheim nakho konke ekunikezayo ngijabule kakhulu ukukukhomba lapho ubheka izindawo ezinhle zokudla, ukuphuza noma ukuvakashela!
Ngimise ifulethi ukuthi kube indawo elula kakhulu yokuzihlola futhi ngihlole, kodwa ngiyatholakala uma unemibuzo noma izidingo ezikhethekile. Ngiyayithanda i-Trondheim nakho konke…
UVinko Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Trondheim namaphethelo